Barack Obama | Dr Ko Ko Gyi's Blog
Tags:Barack Obama, David Cameron, Helle Thorning-Schmidt, Johannesburg, Michelle Obama, Nelson Mandela, Obama, United States
“Rohingya Muslims who fled Burma to Bangladesh to escape religious violence, sit inaboat after being intercepted crossing the Naf River by Bangladeshi border authorities.” Photo by the Associated Press.
Tags:Aung San Suu Kyi, Bangladesh, Barack Obama, Burma, National League for Democracy, Rakhine State, Rohingya, Rohingya people
မာတင်လူသာကင်း လို အသတ်ခံပြီး ကျယ်ကျယ် အော် သွားတဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်မ် လူငယ်မျိူးးဆက်တွေ လိုအပ်နေတယ်
My dear friendRobert Elhose wrote>>>
ဆရာ ဦးကိုကီုကြီးခင်ဗျာ ..
ဆရာ့ရဲ့ အကြံပေးမှု နဲ့ မိသားစု စိတ်ဓါတ်ရှိမှုကို လေးစားပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ထဲက တော်တော် များများက ကျူပ်တို့မွေးထဲက ပါလာခဲ့ပြီးသား လူသားဖြစ်မှု ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဆိုတဲ့ မွေးရာပါ အခွင့်အရေးကို ဟိုကောင် ဒီကောင် တွေဆီ လက်ဖြန့်တောင်းမှ ရနိုင်တယ်၊ ရသင့်တယ် လို့ ခေါက်ရိုးကျိူး နှစ် ၅၀ အာဏာရှင်ခေတ် နေ၀င်း ရိုက်သွင်းထားခဲ့တဲ့ အတွေးအေါ် တွေနဲ့ သွားနေတယ်။ အမှန်က သူတို့ကိုလည်း အပြစ်မတင်ဝံ့ပါဘူး။ တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုက ဒါမျိူး ရွေ့နေတာမျိူးကိုး။ အမှန်က လူဟာ မွေးလာကတည်းက မွေးရာပါ အခွင့်အရေး ပါာခဲ့ပြီးသား။ ရှိနေပြီးသား။ ဒီအချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံကလည်း နိုင်ငံတကာ မှာ လက်မှတ်ထိုးထားပြီးသား။ ခုမှ ဗြောင်လိမ် နေကြတာ။ ကိုယ့်မွေးရာပါ အခွင့်အရေးကို ကိုယ့် ဖာသာ ကိုယ် နိုင်ငံရေး အရ တိုက်ယူမှ ရမယ်။ လက်ဖြန့်တောင်းနေသရွေ့ သူတောင်းစားပဲဖြစ်နေမှာ။ သိက္ခာလည်း မရှိဘူး။ တောင်းလို့ ရတဲ့ ဆုလာဒ် ဟာ မနက်ဖန် ပြန်လုသွားတာ ခံရမှာပဲ။ ယောက်ျားပီပီ အမှန်တရားကို အသံကျယ်ကယ် ပြောပြီး မျှတမှု ကို တောင်းဆို ရမှာပဲလေ။
Tags:Barack Obama, Burma, Myanmar, Thein Sein, United States
Myanmar President fail to answer the questions related to Hate Speeches and Anti-Muslim atrocities
Read this to know HOW the President U Thein Sein REFUSED TO ANSWER or don’t know how to answer the question of “Why Hate Speech are freely allowed to preach.”
His adviser Dr Kyaw Yin Hlaing also could not answer this simple question.
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ အင်မတန် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေအပေါ်ကို တစ်ခါ တစ်ခါ — တဲ့ အမည်းစက်တွေ ရှိပါတယ်။ ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေပေါ့နော်။ အထူးသဖြင့် ရခိုင်ပြည်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စလိုမျိုး၊ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေပေါ့နော်။ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ အပြုသဘောဆောင်နေတဲ့ အခြေအနေတွေ ကြားထဲမှာ လက်ညှိုးထိုးပြစရာ အမြင်မျိုး ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့- ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘာသာရေးအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မေးမြန်းဖို့ ဆိုပြီးတော့ ဦးဝင်းအောင်ရှိနေပါတယ်။ ဦးဝင်းအောင်အနေနဲ့ ထပြီးတော့ မေးနိုင်ပါတယ်။ ဦးဝင်းအောင်ကတော့ အစောပိုင်းက ကျနော်တို့ ဗွီအိုအေရဲ့ ဌာန ဝန်ထမ်းဟောင်းပါပဲ။
Tags:Aung San Suu Kyi, Barack Obama, Burma, Depayin Massacre, Government, Muslim, Thein Sein, United States
Chinese Burmese businessman Win Lei Yi wistfully acknowledged that he had ‘heard the same thing myself’ about how many Burmese were unhappy aboutahuge influx of Chinese into this city in central Myanmar. The Chinese, and the money and trade opportunities that they bring with them, poseastiff challenge to U.S. President Barack Obama, who was in Myanmar on Monday. Obama is trying to re-orient U.S. foreign policy from Europe and the Middle East to Asia to compete with China. Photograph by: Matthew Fisher/Postmedia News , Postmedia News. MANDALAY, Myanmar — A Chinese trader beataBurmese boy in Mandalay’s jade market last week, thinking the youth had stolen about $574 Cdn from him. The Chinese visitor had to be rescued fromahostile Burmese mob.
Tags:Asia, Barack Obama, Burma, China, Mandalay, Myanmar, Rudyard Kipling, United States
Tags:Asia, Aung San Suu Kyi, Barack Obama, Burma, Burmese language, Myanmar, Thein Sein, United States